Coronavirus Manomboka betsaka ny sitrana any Sina
Manomboka mihasitrana ny olona any Sina manoloana ny coronavirus. Efa tafakatra eo amin’ny 1800 ny isan’ny olona sitrana ka nivoaka ny hopitaly.
84 km miantsinanana ny tanàna antsoina hoe Ahwaz no nisy ny ivony. Tamin`ny 11 ora sy sasany tany an-toerana no nandrenesana ilay loza. Tsy mbola voaray kosa ny tatitr`ireo niharan-doza sy niharam-boina naterak`izany. Manao ny asany ny mpamonjy voina any an-toerana mijery ifotony ireo fotodrafitrasa rava sy ny fahavoazana amin`izao fotoana izao.